Yakanakisa Sayenzi Calculator yeVadzidzi! - ALinks
Masainzi macalculator anoshandiswa kugadzirisa matambudziko mualgebra, sainzi, uye mainjiniya. Iyo yemasvomhu karukureta inogona kugadzirisa trigonometry, logarithm, uye zvingangodaro matambudziko mukuwedzera kune akareruka masvomhu mashandiro. Texas Instruments, Casio, uye Sharp zvakaenderera mberi nekugadzira zvemhando yepamusoro macalculator gore negore, asi kune zvimwe zvakawanda sarudzo dzekufunga nezvazvo. Isu takagadzira rondedzero yemamwe akanakisa masayendisiti ekuverenga saiti kukusevha nguva yakawanda. Kunyangwe iwe uri mudzidzi, mainjiniya, kana mushandi wezvekurapa aya ma Calculator achakubatsira iwe muzvidzidzo zvako.
Akanakisa Scientific Calculator
CASIO FX-991EX Yepamberi Injiniya / Sayenzi Calculator (UK VERSION)
Iyo CASIO FX-991EX ndiyo inonyanya kushandiswa kwesainzi Calculator muUnited Kingdom. Calculator iyi inopa akawanda akasarudzika maficha uye zvakare anobatsira kushandisa ayo anoita kuti ifarire vazhinji vevadzidzi. Iine 552 masvomhu maficha, iyo Casio FX-991EX ndiyo Casio inonyanya kuomarara sainzi Calculator. Matanho akakosha 3, 4, uye mashanu ese anotenderwa. Yepamberi GCSE, a / seyero, uye yepamusoro inokurudzirwa. Chero bvunzo yeUK inobvumidza kushandiswa kwecustomer inobvumidzwa. Iwo makuru echisikigo ebhuku rekutarisa (Natural-VPAM) inoratidza masvomhu mazwi senge midzi uye zvidimbu sezvazvinowanikwa mumabhuku, izvo zvinovandudza kunzwisisika nekuita kuti zviwanikwa zvinzwisisike.
Iyo Classwiz nhepfenyuro inopa yakakwira-resolution LC inoratidzira ine 192 × 63 pixels uye resolution iyo yakapetwa kana kukwirisa kupfuura iya yezvinozivikanwa kuratidzwa kweiyo FX-ES Plus akateedzana. Uye zvakare, iyo ClassWiz yakateedzana inozvirumbidza Hardware ine inokurumidza processor uye yakapetwa kaviri saizi yekurangarira.
Iyo UK inotengesa zvakanyanya yepamusoro Scientific Calculator.
Kunyanya inokurudzirwa kune epamberi GCSE, a / seyero uye yakakwira.
Inotsiva iyo yekare Casio fx-991es Uyezve
552 Masvomhu mashandiro
Solar-inofambiswa nebhatiri backup
Tenga @ Amazon
Texas Zvishandiso TI-36X Pro Scientific Calculator
Iyo TI-36X Pro ndeyeTexas Instruments yepamberi Calculator yesainzi inowanikwa mumusika. Calculator iyi inotakurwa netani yezvinhu uye inogona kumhanya pane yakasvibira simba zvakare kureva, simba rezuva. Calculator ine panhivi yezuva yakamisikidzwa kumusoro iyo inobatsira kuti iibhadharwe. Mainjiniya, vadzidzisi, uye nyanzvi vachabatsirwa kubva kuTI's most innovative science calculator. MultiView & trade inoratidzira maquation akati wandei panguva imwe chete, nepo MathPrint & yekutengesa inoratidza masvomhu ekuratidzira mamaki uye zvakapetwa zvidimbu zviri chaizvo sezvazvinoonekwa mumabhuku. Sezvakaita graphing calculator, pinda iyo info, pfuura nepakati pezvinyorwa, uye gadzirisa.
Auto Magetsi Off
Impact nemishonga Cover
Simba Simba: Bhatiri / Solar
Nyowani Casio FX-83GTX Scientific Calculator
Iyo Casio fx-83GTX ndeye yakasarudzika musiyano weCasio fx-83GTPLUS. Inosanganisira toni yezvinhu zvitsva zvinosanganisira hwindo rakajeka, mamenyu akajeka, processor inokurumidza, uye gumi nemana ekuwedzera mabasa. Calculator iyi inobvumidzwa mune chero bvunzo yeUK inobvumidza kushandiswa kwecustomer. Matanho akakosha 14 ne3 anokurudzirwa (kusanganisira GCSE, Yenyika uye Yepamusoro, Junior nekusiya). Iyo hombe Natural Natural Bookbook Ratidza (Natural-VPAM) inoratidza masvomhu mazwi senge midzi uye zvidimbu sezvazvinowanikwa mumabhuku, zvichiita kuti zvive nyore kududzira data.
Bvisa 192 x 63 LCD inoratidzira
Nyore uye yakajeka menyu basa
Random Integer jenareta
Kudzokorodza kuratidzwa kwedesimali
Kuwedzeredzwa kuverenga kwekutanga kwemasvomhu
Yakanakisa Sayenzi Calculator yeVadzidzi!Calculatorsmacalculator evadzidziScientific Calculatormacalculator esainzi evadzidzi
Yakanakisa imba theatre system muuk
Ndezvipi zveKikicha Gadget ini zvandinoda?
Zvakanakisa mCaffeine zvigadzirwa muIndia! Check pano!
Yakanakisa organic ruoko sanitizer India
Dzidzo uye vanotamira kuUK